Muqdisho oo wili ka socda aruurinta Xoolaha . - Awdinle Online
Muqdisho oo wili ka socda aruurinta Xoolaha .
February 22, 2020 (Awdinle Online) –Maamulka gobolka Banaadir ayaa Magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu soo aruurinaayo Xoolaha gaar ahaan Lo’da oo Magaalada Nadaafadeed hoos u dhigtay sidda uu sheegay Duqa Caasimada.
“Iyadoo la fulinaayo amarkii Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa Maamulka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxa uu wadooyinka degmadaasi mara kasoo aruuriyay 129-Neef oo Lo’ ah kuwaas oo caqabad ku ahaa bilicda iyo horumarinta Caasimadda” ayaa lagu yiri War kasoo baxay maamulka goblka Banaadir.
Xoolaha ugu badan ayaa laga soo aruuriyay Suuqa Beerta ee degmada Waabari oo Ganacsatadda Khudaarta ay horay u sheegeen in xoolaha ay dhibaato ku hayaan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan xariga jaray Xarun gaar ah lagu Magacaabo Baadiqabadka oo lagu haayo xoolaha magaalada laga soo aruuriyay.
Previous articleCiidanka Asluubta Soomaaliyeed oo maanta xusaya sanad-guuradooda 50-aad
Next articleMaxkamadda Nugaal oo dhageysi labaad gelineysa Kiiska Haweeney xamilo ah inta la kufsaday lana dilay